Ọnye na-bụ Paul Panda Farnana? - Afrikhepri Foundation
Ònye bụ Pọl Panda Farnana?
Paul Panda Farnana (aha ya bụ Paul Panda Farnana M'fumu, amụrụ na 1888 na Nzemba, nso Unere, nwụrụ n'otu obodo a 12 Ka 1930) bụ onye agronomist na onye nwe obodo Congo.
Aha Paul Panda Farnana akara akụkọ ihe mere eme nke République démocratique du Congo n'ihi ọtụtụ ihe: ọ bụ ya bụ onye mbụ onye Congo gụchara agụmakwụkwọ ka elu BelgiumFrance. Ọ karịrị ndị niile mba Congo mbụ jiri obi ọjọọ katọọ ụzọ ndị colonial si tinye na ndị Belgium. Dịka ọmụmaatụ, ọ kpọrọ oku maka mkpokọta agụmakwụkwọ ụwa yana ohere maka ndị Congo ịga mahadum na Metropolis. Ọ rịọkwara maka nsonye nke ndị otu ya na ndị otu na-eme mkpebi na ngalaba yana maka Africaanization nke cadres.
Ọ bụkwa onye na-arụsi ọrụ ike Pan-Africanism ma soro ya rụọ ọrụ Paul Otlet (otu n'ime ndị nna nke ịntanetị), Henri La Fontaine (Ochet na onye mmekorita na Nobel Peace Prize en 1913), WEB DuBoisna Blaise Diagne na nhazi nke Second Congress-Pan-African, na Palais Mondial, na Brussels na Septemba 1921. O jidere echiche mba ụwa na nke udo nke bụ nke Paul Otlet na Henri La Fontaine.
Ọ chọrọ ịbụ onye ọnụ na-ekwuru Belgian Congo na Brussels wee bawanye isiokwu na akwụkwọ akụkọ nke oge ya. Na 1919, ọ tọrọ ntọala Union Congolaise (Society for Mutual Aid and Moral Development of the Congolese Race), otu ndị na-abụghị ndị na-enweghị uru mkpakọrịta nke ndị Congo malitere na ala Belgium. Otu ebumnuche nke nzukọ a, nke ọ bụ n'aka odeakwụkwọ ukwu na Onye isi asọpụrụ, bụ ịgbachitere ikike ndị agha Congo nke ndị agha Mbụ World War nke ọ bụ. Ndi otu a choro otutu oge ka ha guzobe ihe ncheta diri "onye agha amaghi Congo 'iji gosi ụgwọ nke Belgium n'aka ndị agha Congo ndị lụrụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ ya n'Africa (n'etiti ndị ọzọ ka Taborana Cameroon) nakwa na obodo France. Ihe ncheta maka ụtụ nye ndị agha Congo nke Ike ọha ga-emesị wuo ya Schaerbeek, square François Riga ma malite na 1970, 40 afọ mgbe Panda nwụsịrị.
1888: omumu Paul Panda Farnana na Nzemba di nso Moanda na Lower Congo.
1900: mbata nke Panda na Belgium na Eprel 25, tinyere Lieutenant Derscheid, bụ onye sonyere naBia mbupu na Katanga. Ọ malitere agụmakwụkwọ nke abụọ na Athénée d'Ixelles.
1904: na Ọktọba, ọ gafere ule nbanye n'ụlọ akwụkwọ Vilvoorde nke ịkọ nri na ugbo.
1907: Panda gụsịrị akwụkwọ na oke dị iche; o nwetakwara “akwukwo ikike” ya na ihe omuma nke ihe ubi.
1908: chọsiri ike imecha nkuzi ya, Panda debara aha ya dika nwa akwukwo nke ulo akwukwo nke ulo akwukwo nke Ugbo elu na Nogent-sur-Marne. Na ngwụcha ọmụmụ ya, ọ na-enweta "Asambodo ọmụmụ". Na kọleji azụmaahịa na nke kọleji nke Mons, ọ na-amụtakwu asụsụ Bekee.
1909: Panda goro ọrụ nke Colonial Ministry dị ka "Onye Nchịkwa Ọkwa nke Nri" Nke atọ. Mgbe ha rutere Boma ọ bụ June 21 ka a họpụtara ya Ogige Botanical Eala nso Coquilathville, ebe ọ na-akụzikwara ọmụmụ ihe.
1911: oge ​​ya zuru, Panda malitere na SS Brusselsville, June 21st. Mgbe ọ bịarutere Belgium, ọ natara ọdịiche nke "kpakpando ọrụ". Mgbe ọ laghachiri Congo na Disemba nke otu afọ ahụ, a họpụtara ya onye nduzi nke ọdụ nke Kalamu, Ebe ọ ga-ebu pụta akpan akpan mkpokọta nke herbarium ụdị nọ na Ogige Ubi Mba nke Belgium.
1914: agha dara mgbe Panda nọ na Belgium. Ọ sonyere na "ndị ọrụ afọ ofufo nke Congo". Ndị Congo abụọ ọzọ na-eme otu ihe ahụ: Joseph Adipanga na Albert Kudjabo. Ndị Jamani ga-adọrọ mmadụ atọ a mkpọrọ. Mgbe Joseph Adipanga jisiri ike gbapụ, Paul Panda na Kudjabo Albert ka nọ na nga ruo mgbe ngwụcha nke agha ahụ. Na Disemba 6, 1916, ha zutere n’ụlọ mkpọrọ Soltau nke dị n’ogige agha dị na Germany ma kewapụkwa ọzọ na March 24, 1917. N’ime onye nọ n’ogige ndị agha, ọ bịaruru nso na Senegalese riflemen onye o mere dika onye ode akwukwo. Site na nke a, ọ na-abanye na ya Blaise Diagne, Onye otu omebe iwu Senegal.
N'afọ 1919: a tọhapụrụ ya, Panda laghachiri na Belgium ma nweta arịrịọ ọ rịọrọ ka ọ dịrị maka ọdịmma onwe onye. Na Febụwarị, o sonyere na ọgbakọ omebe iwu mbụ nke Pan-African na Paris, nke a haziri na nkwonkwo nkwonkwo nke Blaise Diagne, onye otu gọọmentị France, na WEB Du Bois, African-American sociologist and head of NAACP (National Association for the Advancement) Nke nwere agba Ndị mmadụ). Na onwa Nọvemba, ya na ndi obodo ya hibere (tinyere Joseph Adipanga na Albert Kudjabo) ndi Union Congolaise, "obodo nke enyemaka na omume na ọgụgụ isi nke agbụrụ Congo". Ọ na-etinye n'okpuru nchebe dị elu nke Louis Franck, Liberal Minister of Colonies naEmile Vandervelde, Onye isi na onye isi obodo.
1920: Panda na-etinye aka na ikpo okwu nke mbụ National Colonial Congress (site na September 18 ruo 20, 1920) bụ ndị a na-enwe nzukọ ha na Senate. A na-ahụta onyinye ya nke ọma n'ihi na ọ bụ naanị ndị Congo kpọrọ ka ha gwa ndị colonial okwu: ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị. Ọ bụ n'oge ọgbakọ a ka Panda zutere Fada Stefano Kaoze, onye odeakwụkwọ Monsignor Roelens mgbe ahụ, onye isi ndịozi nke Haut-Congo. Ndị ikom abụọ na-ewepụta oge iji mara ibe ha na-asọpụrụ ibe ha na Panda na-ekwupụta nkwenye ha na ntinye aka chọrọ nke ndị Congo na ngalaba mkpebi.
1921: a na-eme Congress nke Abụọ Pan-Africa ọzọ na London na Brussels. Panda nọ ọdụ n’ọfịs Congress tinyere Blaise Diagne, WEB Du Bois, Paul Otlet, na Miss Jessie Fauset. Na Septemba 11, Paul Panda na-enye ọgbakọ maka “akụkọ banyere mmepe anya Negro na mpaghara Osimiri Congo”. Na mgbakwunye, o kwupụtara ọchịchọ ya na ndị nnọchi anya ojii ga-anọ na kọmitii mba ụwa na-ahụ maka ịhazi iwu e nyere maka ihe mbụ German nwere na Africa. N'arịrịọ ndị otu Congo, Paul Panda rịọrọ ka ya na ndị ọrụ gọọmentị wee hazie ihe ọmụmụ maka ndị otu ya. Yabụ, a na-emepe akwụkwọ maka ndị gọọmentị ndị Congo nyere nkwado na Brussels, Charleroi na Marchienne. Panda n'onwe ya na-enye nkuzi ole na ole n'akụkụ ndị nkuzi ndị gọọmentị họpụtara. Ebubo nke ịgba ọchịchị mgba okpuru, onye katikist Simon Kimbangu a mara ya ikpe ọnwụ. Ẹmek ubiereikpe esie ẹsịn ke ufọk-n̄kpọkọbi; a kpọgara ya na Katanga, ebe a tụrụ ya mkpọrọ ruo mgbe ọ nwụrụ na 1951. Site na Minista Louis Franck karịsịa, Panda rụrụ ọrụ iji mee ka ndị ọchịchị colonial kwenye na ha agaghị etinye ikpe ọnwụ na onye ahụ a mara ikpe. Kimbangu ka ụfọdụ ndị na-achị ala na-akatọ Kimbangu ka ha na-ewere ya dị ka onye na-eso ụzọ Marcus Garvey. Esemokwu nke ime ihe ike na-emegide Paul Panda na ndị nchịkọta akụkọ nke Avenir Colonial Belge, onye na-ekwuchitere ndị ọchịchị kachasị agbanwe agbanwe.
1925: "nlọghachi nke West" nyere okwu pụrụ iche na nka na nka ndị Congo. Panda na-etinye aka ma na-ekwu okwu dị mkpa n'okwu nka yana ọdịnihu nke omenkà na obodo ya. Ọ katọrọ mkpọsa nke nyeere Europe aka ịwepụta ụlọ ebe ndebe ihe mgbe ochie ya na ndị ọka ikpe na ịchị mba abụghị ihe mmebi iwu "ma ọ bụ karịa".
1929: nloghachi nke Panda na Congo; ọ laghachiri n’obodo ya; o wuru ulo akwukwo ebe ahu tinyekwara uka, raara nye onye nso ya.
1930: Paul Panda Farnana nwụrụ na Mee 12 na obodo ya, dị afọ 41. Na Brussels, ndị Kongo Union na-enwe a uka na-eme ememe na chọọchị nkeAbbey nke Cambre.
Akụkụ nke Paul Panda Farnana: Nationalist, Pan-Africanist, nwere ọgụgụ isi
4 ọhụrụ site na .10,00 XNUMX
1 ejiri site na € 17,90
Zụta € 10,00
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 7, 2021 8:01
Atiya AKWỤKWỌ AFRICAN NA SAGES
Kpachara anya maka fluorine na chlorine n'ime mmiri
Chineke nke mmiri - Ajụjụ ọnụ nke Ogotemmêli (PDF)
Ozizi nke Krishnamurti (ndepụta ọkpụkpọ)
Elizabeth "Bessie" Coleman, onye isi nwanyị nwanyị mbu nke mba nwanyị mbụ